काठमाडौंका मेयर बालेनले गरे अर्को बोल्ड निर्णय, काठमाडौंका मतदाता मात्र हैन भाडामा बस्नेहरु समेत खु’:सीले गद’ गद ! – Ap Nepal
काठमाडौंका मेयर बालेनले गरे अर्को बोल्ड निर्णय, काठमाडौंका मतदाता मात्र हैन भाडामा बस्नेहरु समेत खु’:सीले गद’ गद !
काठमाडौं । काठमाडौंं महानगरपालिका अहिले च’ र्चाको केन्द्रमा छ । यहाँ आशालाग्दा बनेर स्वतन्त्र मेयरको ईन्ट्री भएपछि झनै आशा लाग्दा नि र्णयहरु सार्व’जनिक हुन थालेका हुन् । काठमा’डौंका मतदाताले बालेनलाई जिताएर सही निर्णय गरेको भन्दै अहिले उनीहरुको प्रशंसा भइरहेको छ ।
यसैबीच, बालेनले यहाँका मत’दाता मात्रै होईन् यहाँ घ’रभाडामा बस्नेहरुलाई समेत फाइदा पुग्ने निर्णय गरेका छन् । काठमाडौं महानगर’पालिकाको पहिलो नगर कार्यपालिकाको बैठकले रेष्टुरेन्ट, होटल, पेट्रोल पम्पको शौचालय प्रयोग गर्ने निर्णय पारित गरेको छ। यो निर्णयले सार्वजनिक शौचालय नपाएर छ’ टप’टाउनुपर्ने काडमाडौं महानगरका स्थायी र अस्थायी बासिन्दाहरुलाई ठूलो राहत हुने विश्वास गरिएको छ ।
सोमबार नव’निर्वाचित ज’न’प्रतिनिधिहरूले सपथ ग्रहण गरेपछि अपराह्नमा कार्यपालिकाको बैठक बसेको थियो। सो बैठकले सार्वजनिक शौचालयको रूपमा रेष्टुरेन्टहरूको शौचालय प्रयोग गर्न सकिने निर्णय गरेको हो। मेयर बालेन शाहले प्रस्ताव गरेका थिए।
‘हिजो रेष्टुरेन्ट व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गरेका थियौं। हामीसँग चिकेन स्टेशन, बर्गर स्टेशन, एवानका प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्दा हामीले तपाईंहरूको रेष्टुरेन्ट बाहिर एटिएमको जस्तो बत्ती जडान गरिदिने र शौचालय निःशुल्क गर्ने,’ उनले भने, ‘रेष्टुरेन्ट खोलेपछि व्यापार मात्रै नभएर सेवा पनि हो भन्ने हिसाबले त्यो लगाउँछौं। महानगरले सर्टिफाइ गरिदिन्छ।’
उनले शौचालयहरू पनि बनाउने तर हाललाई यसरी पनि प्रयोग गर्ने बताए। यसरी शौचालय प्रयोग गर्न दिने रेष्टुरेन्टहरूलाई के सुविधा प्रदान गर्ने भन्नेबारेमा निर्णय भइसकेको छैन।
‘अहिले नै यो–यो कुराहरू निशुल्क गरिनेछ भनेर भन्न सकिन्न। त्यसको लागि अध्ययन गर्न पर्ने हुन्छ। पहिलो दिन नै त्यो कुरा गर्नु गलत हुन्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने। यस्तै गुनासो सुन्नको लागि कल सेन्टर पनि स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ। कल सेन्टर सात दिनभित्र स्थापना गरिने निर्णय पनि भएको छ। यस्तैगरी, दुइटा इन्फ्रा’ स्ट्रक्चर एम्बुलेन्स १० दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याइने छ।
यस्तै महान’गरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्था’ पनबारे अध्ययन गर्न नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । काम’पाको नवनिर्वाचित प्रमुख शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको पहिलो कार्य’पालिका बैठकले उपप्र’मुखसहित पाँच जनाको अध्य’यन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।-प्रहारन्युजबाट।
Prevकलाकार दिपक आचार्यकी आमालाई काठमाण्डौमा ट्याक्सीले दिउसै लुट्न खोजेपछी…
Nextपल शाहको मुद्दाबारे उच्च अदालतमा बहस चल्दै ,थुनामुक्त होलान् त ? जेलर के भन्छन् त हेरौ (भिडियो सहित)
ईपीएस : कोरियन भाषा परीक्षामा मागभन्दा कम परीक्षार्थी उत्तीर्ण
ज्ञानेन्द्र शाही सर्वोच्चमै पुगेर न्यायाधीशहरुलाई यसरी थ’र्काए, हेर्नुहोस्(भिडियो सहित)
काठमाण्डौको फोहोर फाल्न नुवाकोटवासीले अबरोध गरेपछि बालेनले सोचे अर्कै विक’ ल्प !